Pakistana: “Fa maninona Rakoto no tsy raharahan’ny Google izahay?” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Septambra 2008 13:51 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Français, Español, Português, বাংলা, عربي, 繁體中文, 简体中文, English
Ampiasain'ny Karana ho sehatra itarainana ny bolongana rehefa niresaka manodidina ny fitongilanan'ny haitaon'ilay goavana Google ry zareo. Ny miteraka adihevitra eto dia ny Google Doodles (soritsoritra google) ho an'i Pakistan. Google Doodles moa no anaran'ireny kisarisary asehon'i Google tsindraindray rehefa amin'ny fotoan-dehibe ireny. Mankalaza sy manome voninahitra ny ankamaroan'ireny fety manerantany ireny na ireny olona fantadaza manerantany ireny ny google amin'ny fampiasany ny doodles. Saingy tsy mbola nahita kosa izahay hatramin'izay doodles ho ana olo-malaza Karana na fety Silamo akory aza. Ny fety tahaka ny hidy na ny Ramadany anefa dia ankalazaina manerana ny tontolo Miozolomana.
Samy manana ny heviny sy ny fomba fijeriny ny mpamaham-bolongana amin'izay mety ho anton'izany. Ilay nanangam-peo voalohany moa dia i Bites85 ao amin'ny ProPakistani, izay notohanan'ny mpamaham-bolongana maro avy eo. Andeha ary isika hizaha izay lazain'ny mpamaham-bolongana Karana:
Manoratra ary i Sohaib Athar ao amin'ny ReallyVirtual :
I personally think that Google not showing any Doodles for Islamic events has something to do with their “Do No Evil” policy 😉 Seriously though, while Google can not be forced to cater to each segment of their customer base, especially since doodling is the secondary responsibility of the guy who creates them, but given that
* Google has doodles for other religious holidays
* Muslims form a huge chunk of their customer base – much larger than, say, Pakistanis, or people who like Escher
* Google has doodles for birthdays and other days that only a tiny portion of the world celebrates
* Google is a PUBLIC company (which does matter)
Eritreretiko fa raha tsy mampiseho Doodles amina fotoan-dehibe Silamo ny google dia noho ny politikan'ny “Do No Evil” arahiny (Tsy manao izay ratsy) 😉 Rehefa tena dinihina anefa, na dia tsy azo terena hikarakara ny isaky ny vondrona fototr'ireo mpanjifany rehetra, indrindra moa fa ambin'andraikitra ho an'ilay mpamorona azy ny manoritsoritra nefa raha jerena kosa dia
* Manana soritsoritra amina fety hafa ny Google
* Mitana anjara toerana lehibe ny Miozolomana raha tsinjaraina ny manjifany – betsaka noho ny isan'ny olona tia Escher hoy ny Karana izay (Inona koa izany Escher?)
* Manana kisoritsoritra fankalazana andro nahaterahana sy andro hafa izay zara raha misy mahafantatra manerantany ny Google
* Orinasa misokatra ho an'ny DAHOLOBE ny Google (ary tsy ny bitika izany)… Raha tsy mba misy mihitsy soritsoritra na dia iray monja ho amina andro lehibe Miozolomana hatramin'izao dia tahaka izao ny hafatra andraisan'ny maro amin'ny Miozolomana azy ‘izahay no vohikala lehibe indrindra ary orinasa iraisam-pirenena, fa tsy dia raharahanay loatra ny Kolontsaina Miozolomana ka tsy mendrika na dia ny hanaovana soritsoritra iray aza’ – Mba ratsy loatra izany dokambarotra izany.
Etsy andaniny kosa dia misy ireo mpamaham-bolongana mitandrina kokoa amin'ny filazany ny heviny amin'izay mety ho antony tsy itiavan'ny Google hanao soritsoritra mety hanakorontana (ary efa nitranga tamin'ny toe-javatra hafa).
Izao no no tsy maintsy nolazain'i Teeth Maestro:
Ny tena banga tokoa raha jerena avokoa ireo soritsoritra Google anjatony dia sary famantarana fety Miozolomana iray, Hidy ve io sa fety Silamo hafa, raha lazaina izany dia eritreretiko fa mampisalasala azy ireo ny hametraka sary (na soritsoritra) fety Silamo ka mety hiteraka savorovoro, nefa afaka manome toky anareo aho fa misy ny fomba tsotra azo atao mba tsy hiteraka fanafintohinana ireny zavatra tsotra ireny.
Hita tsindraindray ao amin'ny sarintanin'i Google i Pakistana fa miandry izahay mba omena voninahitra amin'ny alalan'ny sary amin'ny andro fankalazana ny fahaleovantena ao amin'ny vohikalan'ny Google.com.pk, Efa nahazo kisarisary vitsivitsy ihany ny firenena etsy akaikinay ao India manomboka amin'ny Diwali izany ka hatramin'ny soritsoritry ny 15 Aogositra raha jerena ny vohikala Google.co.in. Fa izahay eto Pakistana kosa manoritsori-tanana (manolanola-tanana) tsy mahandry izay mety ho avy.
Mampirisika ny Google aho mba handinika tokoa amin'ity fangatahana ataonay rehefa tsy mandratra fa hanaitra (amifaliana) ny Miozolomana raha mba manao soritsoritra mifanaraka amin'ny kolontsainay izy.
Efa nahazo ny fon'ny Karana sy Silamo maro mpampiasa aterineto ny Google. Maro no misafidy ny tolotra omen'ny Google miohatra amin'ny mpifaninana aminy. Na izany aza tsy mifanaraka amin'ny lazan'ny Google loatra raha misy ny fiangarana. Noho izany manantena aho fa hihaino anay ny Google ary hametraka soritsoritra Hidy amin'ity indray mitoraka ity 🙂